hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်အပြုအမူကိုရှာဖွေခြင်းကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (10) - Your Brain On Porn မှဤရောဂါကိုငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း ICD-5 နှင့် DSM-2016 ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 17 APR 2016
keywords: Behavioral စွဲ; အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ; DSM-5; hypersexual အပြုအမူ; hypersexual အပြုအမူရောဂါ; ICD-10; ICD-11; ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထဲက; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive ရည်ညွှန်းနိုင် Diagnoses နှစ်ပေါင်းများအတွက် DSM နှင့် ICD တွင်ထည့်သွင်းထားသည်နှင့်ယခုနှစ်ဦးစလုံး DSM-5 သုံးပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တရားဝင်ရောဂါခြင်းကိုနှင့်မကြာသေးမီက ICD-10 အဖြေရှာတဲ့နိုင်တဲ့ coding ပြဌာန်းပေးနိုင်သည်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ ICD-11 ဘို့စဉ်းစားနေပါသည်.
Kraus et al ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ICD-11 အတွက်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားခြင်းနှင့် hypersexual ရောဂါ၏ရောဂါ DSM-5 အတွက်ပါဝင်များအတွက်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (ယား) ကပယ်ချခဲ့ကွောငျးလေ့လာတွေ့ရှိထားကြောင်းခဲ့ရေးသားခဲ့သည် ။ ဒါဟာ DSM-III ကို 1980 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ကတည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive ရည်ညွှန်းနိုင် diagnoses အဆိုပါ DSM တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ် , ထို ICD ၌ပထမဦးဆုံး6အတွက် ICD-1948 နှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းပါဝင်သည့်ခွဲခြားကဆက်ပြောသည်ကတည်းက ။ DSM-IV နှင့် DSM-IV-TR ခုနှစ်တွင်၏ရောဂါ (302.9) ပါဝင်သည်ခဲ့ပါတယ် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်မဟုတ်ရင် [NOS] မသတ်မှတ်ရသေးပါ '; ဒီ hypersexual အပြုအမူပါဝင်သည့်ရောဂါအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ ။ ICD-6 နှင့် -7 ခုနှစ်တွင်ဟူသောဝေါဟာရကို '' ရောဂါဗေဒလိင် '' ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် [5, 6]; ICD-8 အတွက် '' ရောဂါဗေဒလိင် NOS '' ထည့်သွင်းသောဝေါဟာရကို '' မသတ်မှတ်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသှဖေညျ ', ပါဝင်သည်ခဲ့သည် ။9ထုတ်ဝေ ICD-1975, နှင့်ဘေးဖယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေအများဆုံးနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသောများတွင်ဤအမြိုးအစား '' သတ်မှတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသွေဖည်ခြင်းနှင့်မမှန် '' အဖြစ်ဆက်လက်ခဲ့သည် ။ ICD-9-CM (လက်တွေ့ပြုပြင်မွမ်းမံ), 1989 အတွက်အသုံးပြုမှုသို့ကြွလာတော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုများအတွက်အထူးထုတ်ဝေထားတဲ့ထုတ်ဝေ, 'မသတ်မှတ်ထားသော psychosexual ရောဂါ' ၌ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤ diagnoses 302.9 ၏အဖြေရှာတဲ့ကုဒ်ခဲ့လေသည်။
ဝိရောဓိ, hypersexual ရောဂါ DSM-5 များအတွက်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကပယ်ချခံခဲ့ရပေမယ့် , 1 အောက်တိုဘာလ 2015 ရက်နေ့တွင် ICD-10 ၏ရောဂါရှာဖွေကုဒ်များ၏အသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏ရောဂါဖွင့်, United States မှာမဖြစ်မနေဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤကုဒ်နံပါတ်များကိုကွင်းကွင်းနှင့် DSM-5 ရှိမီးခိုးရောင်စာသားများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ။ ICD-10 ခုနှစ်, အမျိုးအစား '' အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို '' F52.7 အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်; ရက်စွဲနှင့်ဖွားများအပေါ်ရှုတ်ချခေါ်ဆိုဝေါဟာရများထင်ဟပ်သောဤအမျိုးအစား, တစ်ခုဖြစ်သည်: (, p ။ 194):
'' အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးရံဖန်ရံခါများသောအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းလူကြီးကာလအတွင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို၏တိုင်ကြားပေမည်။ အဆိုပါအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုတစ်ဦးထိခိုက်စေရောဂါ (F30-F39) မှအလယ်တန်းဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပါကစိတ်ဖောက်ပြန်၏အစောပိုင်းအဆင့် (F00-F03) ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောအခါ, အခြေခံရောဂါ coded ရပါမည်။ ဘယ်အချိန်မှာ ပါဝင်ပါသည်: nymphomania satyriasis '' ။
အဆိုပါ WHO က ICD-10 ၏တစ်ဦးက '' လက်တွေ့ပြုပြင်မွမ်းမံ '' ICD-10-CM အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထုတ်ဝေခဲ့  2016 ၌တည်၏။ ICD-52.7-CM နှောင်းပိုင်း 10s အတွက်ကနဦးကိုပြင်ဆင်သောအခါအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို, F1990 များအတွက်အဖြေရှာတဲ့ကုဒ်, United States မှာအသုံးပြုရန် '' ဆက်လက်အနားပေး '' ခံခဲ့ရပါတယ် ။ အဆိုပါအကြံပြုကုဒ်သည် ICD-10-CM အညွှန်းကိန်းအရသိရသည် '' ဥစ္စာသို့မဟုတ်လူသိများဇီဝကမ္မအခြေအနေကြောင့်မပေးနဲ့အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု '' များအတွက်ကုဒ်ဖြစ်သော F52.8 ဖြစ်၏ '' အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို '' ၏ပါဝင်မှုအသုံးအနှုန်းများ, 'nymphomania' နဲ့ 'satyriasis' 'F52.8 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။ DSM-5 F52.8 အဖြစ်ကိုလည်းစာရင်း '' သည်အခြားသတ်မှတ်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု '' ။ ဒါဟာရောဂါ, အရှင် hypersexual ရောဂါအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ICD-11 2018 သည်အထိထုတ်ဝေခံရဖို့စီစဉ်ထားသည်မဟုတ်ပေမယ့်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစဉ်းစားနေပါသည် နှင့်အကြံပြုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဟာ ICD-11 Beta ကိုမူကြမ်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတင်ထားလျက်ရှိသည် သည်အရာ၏စာသား:
မကျူးလွန်နိုင်သောလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါသည်မတွန်းလှန်နိုင်သော၊ ထိန်းချုပ်။ မရသောအဖြစ်အပျက်များကိုတွန်းလှန်။ ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းချက်များဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသို့ ဦး တည်သွားစေပြီး၊ လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသည်လူတစ် ဦး ၏ဘဝ၏ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်လာခြင်းကဲ့သို့သောထပ်ဆင့်ညွှန်းကိန်းများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများ (သို့) ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (ဥပမာ - ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အကျိုးဆက်များ၊ ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ရှိသော်င်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုမှုများတွင်ဆက်လက်ပါ ၀ င်ခြင်း။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အတွေ့အကြုံများသည်လိင်မှုကိစ္စမတိုင်မီချက်ချင်းပင်တင်းမာမှုသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်စေမှုနှိုးဆွမှုကိုတိုးပွားစေပြီး၊ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အပြုအမူပုံစံများသည်တစ်ကိုယ်ရေ၊ မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊
ထို့အပွငျက hypersexual အပြုအမူဟာယားများကပယ်ချခံခဲ့ရပေမယ့်, တကယ်တော့အတွက် ICD ဝေးနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်စိတ်ရောဂါအများစုအသုံးများခွဲခြား, နှင့်၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေ codes တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည့်နှင့်အခြားနေကြသည်သည်သတိပြုရပါမည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်နိုင်ငံများ [17, 18] အဖြစ်မရှိ, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည်သော DSM-5 diagnoses, ဆန့်ကျင်။ ဒါဟာအရှင် hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါရှာဖွေအဖွဲ့အစည်းများနေဆဲစေနိုင်ပြီးရောဂါရှာဖွေ nomenclature နှင့်စံ၏သနျ့စဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏သဘောသဘာဝနှင့်အကြောင်းတရားများသို့ထပ်မံသုတေသနလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မူဘောင်များကိုဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။
RBK အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျားအထောက်အထား Disorders DSM-5 Workgroup အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အ ICD-11 အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်များအတွက်အကြံပြုချက်များအောင်နှင့်အတူတရားစွဲဆိုသောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏လိင်ကျန်းမာရေးနှင့် Disorders ကော်မတီ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တော်မူ၏ ဤစာတမ်းမှသာဒီစာရေးဆရာများ၏အမြင်များမဟုတ်, ဤအကိုအခြားအဖွဲ့အစည်းများထင်ဟပ်။
1 Kraus SW, Voon V., Potenza MN တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စှဲမွဲမှု 2016; Doi:10.1111 / add.13297.
2 Kafka အမတ် Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ. Arch လိင်ပြုမူနေ 2010; 39: 377-400.
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 153
3 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့. အဆိုပါ ICD-6 ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သမိုင်း. ဂျီနီဗာ: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 1949။ : မှာရရှိနိုင်http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOfICD.pdf (1 စက်တင်ဘာလ 2015 ဝင်ရောက်) ။
4 Kaplan က MS, Krueger RB ရောဂါ, အကဲဖြတ်ခြင်း, hypersexuality ကုသ. J ကိုလိင် Res 2010; 47: 181-98.
5 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ ICD-6. ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 1948.
6 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ ICD-7. ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 1955.
7 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ ICD-8. ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 1965.
8 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ ICD-9. ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်; 1975.
9 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ လက်တွေ့ပြုပြင်မွမ်းမံ ICD-9-CM ရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး, 9th တည်းဖြတ်မူ,. ဝါရှင်တန်ဒီစီ: ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန, 1989.
10 Kafka အမတ် hypersexual ရောဂါမှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ Arch လိင်ပြုမူနေ 2014; 43: 1259-61.
11 American Psychiatric Association စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, DSM-5. Arlington, ဗာဂျီးနီးယား: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး; 2013.
12 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ အဆိုပါ ICD-10 စိတ်ကျန်းမာရေး၏ခွဲခြားရေးနှင့်အပြုအမူ Disorders ။ လက်တွေ့ဖော်ပြချက်များနှင့် Diagnostic လမ်းညွှန်ချက်များ. ဂျီနီဗာ: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 1992.
13 အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး ICD-10-CM 2016: အဆိုပါအပြီးအစီးတရားဝင်မူကြမ်း Code ကိုသတ်မှတ်မည်. Evanston, IL: အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး;2016.
14 ပထမဦးဆုံးအကို MB. အယ်ဒီတာ့အာဘော်နဲ့ ICD-5 များအတွက်အတိုင်ပင်ခံ, DSM-11, နှင့် WHO ကမှအတိုင်ပင်ခံ Coding ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေး, 15 ဖေဖော်ဝါရီလ2016.
15 Stein DJ သမား, Kogan CS, Atmaca အမ်, Fineberg NA, Fontenelle LF, Grant က je et al ။ အဆိုပါ icd-11 အတွက် compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါများ၏ခွဲခြား. J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 2015.
16 ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့. ICD-11 Beta ကိုမူကြမ်း (သေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါစာရင်းအင်းများအတွက်ပူးတွဲ linear) 2015 [မှာရရှိနိုင်:http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en (22 မတ်လ 2016 ဝင်ရောက်) ။
17 ရိဒ် GM က, Correia JM, Esparza P., Saxena ကအက်စ်, ဗိုလ်မှူးအမ် စိတ်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်စိတ်ပညာရှင်၏သဘောထားကို WPA-WHO ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်တမ်း. ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု 2011; 10: 118-31.
PDF ဖိုင် (953K)
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 58
18 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး Orgainzation. အခြေခံပညာစာရွက်စာတမ်းများ (အင်တာနက်). 2014 (14 နိုဝင်ဘာ 2015 ကိုးကား) ။ မှာရနိုင်သည် http://apps.who.int/gb/bd/.